OKWU OBAMA KWURU NA AFO NARI KEMGBE OMUMU MANDELA
Previous USAIN BOLT SETIPURU MAKA ORU FOOTBALL NA AUSTRALIA
Next ARUMUKA BANYERE EBUBO NA NDI AGHA NIGERIA ANAGHI EFU
Onye bu onye isi US President Barack Obama ka esiri nye ndi mmadu iri na ise aka na South Africa na Tuesday dika ebe etiti ememe ndi n’eme ihe di otu afo ise kemgbe omumu Nelson Mandela.
Obama emeela ọhụụ ole na ole ka ọ na-ahapụ White House na 2017, ma ọ na-ekwukarị Mandela na ọ bụ otu n’ime mkpali dị ukwuu ná ndụ ya.
Ọ ga-anapụta ihe ọmụmụ Nelson Mandela na nke ọ bụla na stadium egwuregwu na Johannesburg na 1245 GMT na adreesị e setịpụrụ iji gbaa ndị na-eto eto ume ịlụ ọgụ iji kwado ochichi onye kwuo uche ya, ikike ụmụ mmadụ na udo.
A dịghị atụ anya na Obama na-akatọ onye na-anọchi ya Donald Trump, ma a ga-enyocha okwu a maka nlezianya ọ bụla.
Mandela, onye nwuru na 2013, ka na-abụrụ akara ngosi zuru ụwa ọnụ maka mgbagwoju anya ọ na-alụ megide ọchịchịrị apartheid na-acha ọcha-na ozi ya maka udo na imekọrita mgbe a tọhapụrụ ya n’agbata afọ iri abụọ na abụọ n’ụlọ mkpọrọ.
Obama zutere Mandela nanị obere oge na 2005 mana o kwuru okwu na olili ozu ya na Mandela “na-eme ka m chọọ ịbụ ezigbo mmadụ” ma na-akpọ ya “onye mmeri ikpeazụ nke narị afọ nke 20”.
Okwu Tuesday na-abịa n’ehihie nke “Mandela Day” – ụbọchị ncheta ụbọchị ọmụmụ ya, nke a na-akara gburugburu ụwa kwa afọ na July 18.
Ihe ncheta nke Mandela nke 100 emeela ka ha buru ihe ncheta na ukpuru nye ndi ndu nke onye isi ike, tinyere ihe ndi ozo banyere ihe nketa ya na South Afrika n’ihi na osiri na 1999.
President South Africa President Cyril Ramaphosa ekwuola na ya ga-eme ụbọchị ahụ site n’ịnye ọkara ụgwọ ya maka ọrụ ebere iji sọpụrụ “nnukwu àjà ndị o mere nakwa nkwụsi ike ya na-eme ka ndụ ndị kachasị mfe dịrị ndụ.”
Ma, F.W. de Klerk, onye isi oche mbụ bụ onye keere Mandela na Nobel Peace Prize na 1993, gwara AFP: “Ekwenyesiri m ike na President Mandela ga-enwe nchegbu miri emi, dị ka m bụ, banyere ọnọdụ dị ugbu a na South Africa.”
“Ọhụụ ọhụụ nke ime ka udo dị na South Africa aghọwo ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị adị n’ime (ịchị) ANC n’oge ahụ,” ka o kwuru.
Ọtụtụ narị mmadụ dọrọ n’èzí n’ámá egwuregwu Wanderers malite n’isi ụtụtụ, ya na Ramaphosa na nwanyị di ya nwụrụ bụ Graca n’etiti ndị ọbịa a tụrụ anya ya.
“Anyị chọrọ inwekwu olileanya n’ihi na anyị bi n’oge nsogbu,” Nomsa Nkosi, 45, nwanyị kpuru ìsì, gwara AFP n’ihu okwu ahụ.
“Mandela bụ otu n’ime ụdị obiọma, ọ dịkwa anyị mkpa ka ndị na-eto eto bịa ịhụ ihe mkpali na-akpali – ọdịdị nke Obama ga-enye taa.”
Tupu ị rute na South Africa, Obama kwuru obere oge na Kenya, obodo nna ya.
O mepere otu onye na-eto eto na-eje ozi site na nwanne ya nwanyi wee gaa n’ulo nke nne nne nna ya n’ime obodo Kogelo, ebe amuru nna ya ma lie ya.
Obama ga-ezokwa otu nnukwu mgbakọ obodo na Johannesburg na July 18 maka 200 ndị ntorobịa na-eto eto si n’ofe Afrịka họrọ ịga ụbọchị ọzụzụ ụbọchị ise.
A tụrụ Mandela mkpọrọ n’okpuru ọchịchị apartheid na 1962 ma tọhapụ ya nanị n’afọ 1990, mgbe ọ gara n’ihu na-eduga ná nnọkọ ntụrụndụ Africa National Congress ruo mmeri na ntụrụndụ mbụ nke ọtụtụ agbụrụ n’afọ 1994.
Ememe ncheta a na – agụnye ihe ndị ọzọ dịka njem na Johannesburg nke Graca Machel na – eduzi, nhapụ akwụkwọ ozi Mandela dere site na ụlọ mkpọrọ ya na ibipụta akwụkwọ ego ncheta.
africa barack global hot Isimbido ISIMBIDO POST isimbido posts isimbidopost ISIMBIDOPOSTS LATEST MANDELA nelson new obama post posts WORLD